बीपी प्रतिष्ठानका महँगा उपकरण बिग्रेका बिग्य्रै- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
सुनसरी — बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जडान गरिएका महँगा उपकरणहरू बिग्रेका छन् । बिरामीको विभिन्न अवस्था जाँच गर्ने उपकरण बिग्रेपछि अन्यत्र महँगोमा परीक्षण गराउनुपर्ने बाध्यता छ ।
कार्डियाक क्याथल्याब, अक्सिजन प्लान्ट, सिटिस्क्यान, एमआरआई, इन्डोस्कोपी, डेन्टलको सेफालोग्राम एक्सरे एकसाथ बिग्रेपछि समस्या भएको हो । चिकित्सकले तिनै आधुनिक प्रविधिको सहयोगमा बिरामीको उपचार सेवा गर्दै आएका थिए । कतिपय उपकरण बिग्रेको महिनौ बितेको छ । केही सायतायता काम नगालग्ने भएका छन् ।
भदौ १० गते क्याथलाब बिग्रेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । मुटु तथा नसा रोगीहरूको अत्यधिक चापलाई मध्यनजर गर्दै प्रतिष्ठानले तीन वर्षअघि जडान गरेको अत्याधुनिक सुविधाय्क्तु बहुउपयोगी कार्डियाक क्याथल्याब बिग्रेपछि मुटु र नसा रोगीको उपचार प्रभावित भएको छ ।
सरकारले उपलब्ध गराएको ८ करोड रुपैयाँमा क्याथल्याब जडान गरिएको थियो । बिग्रेपछि सायतायता क्याथल्याबमार्फत उपचार गर्नुपर्ने मुटुरोगीलाई भर्ना लिन बन्द गरेको एक चिकित्सकले बताए । ‘कार्डियाक क्याथल्याब नै बिग्रेकाले कुनै पनि मुटुरोगसँग सम्बन्धित बिरामी भर्ना बन्द गरिएको छ’ उनले भने, ‘उपकरण बिग्रनुअघि भर्ना भएकाहरूलाई अन्यत्र रिफर गरिएको छ ।’
प्रतिष्ठानमा क्याथल्याब गर्नुपर्ने बिरामीहरू मासिक ६० भन्दा बढी आउने गरेका थिए । क्याथल्याब सञ्चालनमा आएपछि मुटु रोगसम्बन्धी सेवाहरू एन्जियोग्राफी, एन्जियोप्लास्टी, मुटुका साँघुरिएका भल्भहरू बिनाअपरेसन खोल्ने प्रक्रिया मैट्रल, एरोटिक, पल्मोनरी भल्भोटोमी सेवा तथा जन्मजात मुटुभित्र हुने विभिन्न प्रकारका प्वालहरू बिनाअपरेसन ढकन लगाई प्वाल टाल्ने सेवा तथा असामान्य किसिमका नसाहरूको समेत उपचार भइरहेको थियो ।
क्याथल्याब मर्मत सम्भार गर्नका लागि सोमबारमात्र प्राविधिक आएर हेरिरहेका छन् । कहिलेसम्म बन्ने हो त्यसको टुंगो नलागेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । कतिपय उपकरणका वारेन्टी पिरियड सकिएकाले मर्मत सम्भार खर्च र बिग्रेको पार्ट प्रतिष्ठान आफैंले किन्नुपर्ने भएको छ । तर प्रतिष्ठानमा हाल निमित्त उपकुलपति प्राडा गुरु खनालसँग आर्थिक अधिकार नरहेकाले ती बिग्रेका उपकरण बेलैमा बन्नेमा शंका रहेको प्रतिष्ठान श्रोतले बतायो ।
प्रतिष्ठानमा पूर्वका सबै अस्पताललाई आपूर्ति गर्न सक्ने १६ सय लिटर प्रतिमिनेट उत्पादन गर्ने अक्सिजन प्लान्ट बिग्रेको करिब दुई महिना भयो । उक्त अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेको आठ महिना नपुग्दै बिग्रेपछि अक्सिजन उत्पादन गर्न सकेको छैन ।
३ करोड २४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर जडान गरेको प्लान्ट बिग्रेर अक्सिजन उत्पादन हुन नसकेपछि सुनसरीको खनारस्थित दुर्गा अक्सिजन प्लान्टबाट दैनिक ६० हजार रुपैयाँदेखि ८० हजार रुपैयाबराबरको सिलिन्डरमा आपूर्ति गरिरहेको छ । अर्काको प्लान्टबाट अक्सिजन किन्नु प्रतिष्ठानको लागि अतिरिक्त भार हो ।
उपकुलपति खनालले दुई सातामा र अक्सिजन प्लान्ट आपूर्तिकर्ता कम्पनी डाइग्नोकेनका सञ्चालक विज्ञान अर्यालले एकसातामा मर्मत गरेर प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने दाबी तीन साताअघि गरेका थिए । अर्याल हाल प्रतिष्ठानमै छन् तर प्लान्ट बन्ने टुंगो लागेको छैन ।
प्रतिष्ठानको इमर्जेन्सी र सेन्ट्रलमा जडान भएका दुइटा सिटिस्क्यानमध्ये इमर्जेन्सी कक्ष सिटिस्क्यान बिग्रेको एक वर्ष नै बितिसकेको छ । इमर्जेन्सीको १६ स्लाइसको सिटिस्क्यान बिग्रँदा सेन्टरमा रहेको २ स्लाइसको सिटिस्क्यानले काम चलाउनुपरेको प्रतिष्ठान श्रोतले जनाएको छ ।
इमर्जेन्सी कक्षको सिटिस्क्यान बिग्रेपछि प्रतिष्ठानले नैकापको मेदी सोल्युसनसँग पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा नयाँ सिटिस्क्यान जडान गर्ने तयारी गरेको प्रतिष्ठान श्रोतले जनाएको छ । यसअघि २ स्लाइसको सिटिस्क्यानले पनि राम्रो काम नगर्ने र इमर्जेन्सीको सिटिस्क्यान पनि बिग्रिरहने भएकाले कतिपय बिरामीलाई अन्यत्र रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो ।
प्रतिष्ठानमा रहेको जिरोपोइन्ट ३५ टेस्लाको एमआरआईको एउटा भाग बिग्रँदा टाउको र घुँडाको एमआरआई भए पनि मेरुदण्डको एमआरआई हुँदैन । मेरुदण्डको एमआरआई गर्नुपर्ने बिरामीलाई अन्यत्र पठाउन गरेको प्रतिष्ठान श्रोतले जनाएको छ । उता प्रतिष्ठानहाता भित्रै रहेको सेफालोग्राम एक्सरे मेसिन बिग्रेको दुई वर्ष बितिसकेको छ ।
समग्र दाँतको एक्सरे गर्ने उक्त उपकरण बिग्रे पनि मर्मत गर्ने वा नयाँ किन्ने विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । दन्तचिकित्सक तथा प्रतिष्ठानको जुनियर वेल्फेयर सोसाइटीका अध्यक्ष डा. कविराज पौडेलले सेफालोग्राम एक्सरे गर्नुपर्ने दाँतका समस्या भएकालाई अन्यत्र रिफर गर्न बाध्य भएको बताए । उनले भने, ‘सेफालोग्राम एक्सरे गर्नु पर्ने दाँतका समस्या भएका धेरै आउँछन् तर यहाँ भएको उपकरण बिग्रेको छ । यहाँ नभएपछि अन्यत्र रिफर गर्नुपरेको छ ।’
प्रतिष्ठानमा बिरामी उपचारका लागि जडान गरिएका महँगा उपकरण बिग्रँदा बेलैमा मर्मत सम्भार वा नयाँ खरिद गर्न नसक्दा प्रतिष्ठानलाई नै दैनिक घाटा हुँदै आएको छ । हाल प्रतिष्ठानमा अधिकारविहीन उपकुलपति मात्र छन् । उपकरण बिग्रेमा वा नयाँ किन्नका लागि अस्पताल निर्देशकलाई आर्थिक अधिकार दिइएको छैन ।
रजिस्ट्रार, डेपुटी रजिस्ट्रार अख्तियारको नगरानीमा छन् । चिकित्सकहरूले अधिकारसम्पन्न उपकुलपति र रजिस्ट्रार तत्काल नियुक्त गर्न सके मात्र प्रतिष्ठानले नयाँ जीवन पाउने बताएका छन् ।
प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०९:२८
७८ रुपैयाँ मिलाउन २३ हजार खर्च
भाद्र २३, २०७६ रमेशचन्द्र अधिकारी
धनकुटा — एक सरकारी कार्यालयको बैंक खातामा रहेको ७८ रुपैयाँ मिलाउन राज्यकोषको २३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । खातामा रहेको रकम शून्य गराउन कार्यालयले कर्मचारीलाई जहाज चढाएर दैनिक भत्तासमेत दिएर मन्त्रालय पठाउँदा त्यति खर्च भएको हो ।
तत्कालीन पशु सेवा कार्यालयको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक धनकुटाको खातामा ७८ रुपैयाँ बाँकी थियो । नयाँ संरचनामा गएपछि गत मंसिरदेखि उक्त कार्यालयको नाम भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञकेन्द्रमा परिणत भएको छ ।
नाम परिवर्तन भएपछि पहिलेको बैंक खातामा रहेको सबै रकम शून्य भए मात्र बैंक खाता सञ्चालन गरिने कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट दबाब आएपछि कार्यालयले कर्मचारी काठमाडौं पठाएको हो ।
खातामा रहेको रकम भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा विभागबाट सहज रूपमा मिलाउन ध्यान नदिंदा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले अधिकृतस्तरको एक कर्मचारीलाई खटाएको स्रोतले जनायो । गत असार अन्तिम साता कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले केन्द्रको खातामा ७८ रुपैयाँ रहेको थाहा पाएपछि तत्काल शून्य गर्न दबाब दिएको पशुविज्ञ केन्द्रका प्रमुख डा. शिवजीप्रसाद दासले बताए ।
‘कार्यालयको बैंक खाता नै रोक्का हुने भएपछि हतारमा मन्त्रालयमा कर्मचारी पठाउनुपरेको हो’, उनले भने, ‘७८ रुपैयाँका लागि प्लेन भाडा र डिए (दैनिक भत्ता) खर्चिंदा २३ हजार रुपैयाँ खर्च पो भयो ।’ पशुविज्ञ केन्द्रले शाखा अधिकृत दुर्गा सुवेदीलाई नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने तीन दिनअघि हतारमा खटाएको थियो । हतार गरेर जानुपर्दा काठमाडौं जाँदा ५ हजार २ सय र फर्कंदा ७ हजार ५ सय रुपैयाँको जहाज भाडा, दैनिक १६ सयको दरले भत्ता, गाडी तथा खाना लगायतको जम्मा २३ हजार खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
लगातारको वर्षाका कारण पहिरो जाँदा राजमार्ग बन्द भएको र समय छोटो भएकाले हतारमा प्लेनको विकल्प नै नभएको शाखा अधिकृत सुवेदीले बताए । कार्यालयको नाममा रहेको बैंक खातामा पशुसम्बन्धी घुम्ती कोषको रकम ७८ रुपैयाँ बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । रकम थोरै भए पनि मन्त्रालयले मात्र मिलाउन सक्ने भएकाले धाउन बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।
कोलेनिकाले जानकारी दिनुअघि उनले बैंक खातामा रकम कति थियो भन्नेबारे आफू जानकार नभएको कार्यालय प्रमुख दासले बताए । एक वर्षमा चार जना लेखापाल परिवर्तन भएकोले खातामा रहेको रकमबारे अलमल परेको दाबी गरे ।
मंसिरमा परिवर्तन भएको कार्यालयले ७ महिनाको अवधिभित्र खाता शून्य गर्नुपर्नेमा ढिलासुस्ती गर्दा बढी खर्च व्यहोर्नुपरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक नरेश खरेलको भनाइ छ । पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले समयमा काम नगर्दा राज्यको लागत बढेको छ, उनले भने, गत मंसिरदेखि नयाँ संरचनामा गएको कार्यालयले किन अन्तिम समयसम्म खाता शून्य गर्न चासो दिएन भन्ने कुरा जटिल हो ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम क्षणमा मन्त्रालयमा पनि कामको बोझले उक्त काममा चासो नदिएको हुन सक्ने उनको तर्क छ । समयमा ध्यान गएको भए खर्च बिना नै काम सल्टिन्थ्यो, उनले भने, राज्यकोषको व्ययभार बढी हुने भएपछि मन्त्रालय तथा विभागले पनि त्यसतर्फ चासो दिनुपर्थ्यो । कतिपय कार्यालयको सम्बन्धित विभागले नै क्लियर गरिदिंदा जटिलता भएन ।
पशुसम्बन्धी घुम्ती कोषको रकम भएकाले कार्यालयको अर्को खातामा कोलेनिकाले उक्त ७८ रुपैयाँ सार्न नसकिएको जनाएको छ । मन्त्रालयबाटै समाधान गरिनुपर्ने विषय भएकोले बेलैमा सोचिनु पर्नेमा अन्तिम क्षणमा हतारिंदा राज्यकोषको व्ययभार बढेको कोष प्रमुख खरेल बताउँछन् ।
यसैबीच, तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको नामको बैंक खातामा पनि यस्तै समस्या रहेको थियो । शिक्षा विकास निर्देशनालयका रूपमा परिवर्तित भएपछि पुराना कार्यालयको बैंक खाता शून्य गर्नुपर्ने कोलेनिकाले जनाएको छ । उक्त कार्यालयको खातामा ७२ हजार रुपैयाँ बाँकी थियो ।
तर कार्यालयको अरू थप कामको सिलसिलामा मन्त्रालय जानेक्रममा बैंक खाताको कामसमेत टुंग्याएको निर्देशनालयका उपसचिव कृष्ण पोखरेलले जानकारी दिए । खाताको कामका लागि मात्र खर्च नभएको उनको दाबी छ ।
प्रकाशित : भाद्र २३, २०७६ ०९:२३